"Kuzwakala kusekhaya" Igumbi lokulala elikhulu, Indawo Enhle Kakhulu
Ikamelo e-i-villa ibungazwe ngu-Moh'D
Igumbi lokulala elikhulu e-villa etholakala endaweni ethokomele futhi eyikhaya eWest Bay Area ene-7min kude ne-The Pearl Qatar, 15min away to HIA (airport) kanye ne-10min ukuya eDoha Downtown/Souq Waqif.
Ifenisha ngokugcwele, ene-ensuite bathroom, i-AC, ikhabethe elikhulu elakhelwe ngaphakathi elinesibuko nefasitela elibheke endaweni.
Igumbi lokuhlala, Ikhishi Elihlonyiswe Ngokugcwele, Ingadi/Igceke, Indawo Yokuzivocavoca kanye Nechibi Lokubhukuda (ngaphakathi kwekhompiyutha), 24/7 Isuphamakethe enebanga eli-2min lokuhamba. Ukufakwa kwe-Wi-Fi kuzo zonke izindawo, Izilwane ezifuywayo ezinobungani, indawo yokupaka izimoto ezisemgwaqweni.
Okokuqala ukwamukela kusengaphambili eQatar kanye endlini , i-villa inamagumbi okulala angu- 4 , ikamelo lami , igumbi lehhovisi ( ngilenze njengehhovisi lomsebenzi wami ) namagumbi amabili okulala e-Airbnb elinye lawo ( leli olibukayo ) , master Igumbi lokulala elinendlu yokugezela ngaphakathi kwekamelo , nelinye igumbi , elinegumbi lokugezela langasese ( elingabelwe muntu kodwa hhayi ngaphakathi kwegumbi kodwa likude nomnyango wegumbi amamitha angu - 2 kuphela ) .
ikhishi , igumbi lokuphumula , igumbi lokuwasha ... njll konke kuyahlanganyelwa futhi kuphansi phansi .
endaweni yendlu imaphakathi ne-doha ngandlela thize ( I-Doha incane ngempela uma iqhathaniswa namanye amadolobha ) futhi ungafinyelela izindawo eziningi usebenzisa i- uber noma itekisi phakathi kwamaminithi angu-10-15 kanye nezindleko ezicishe zibe ngu-9USD.
ngithemba ukuthi lokhu kuzophendula imibuzo yakho, uma kukhona okunye okudingayo ngicela ungazise.
sicela uqinisekise ukuthi ufunda imithetho yendlu futhi ukuze uqinisekise ukuhlala okujabulisayo kwakho nabanye
Isivakashi esingu-1 sezivakashi asivunyelwe emakamelweni / egumbini lokuhlala kuphela ( Ground Floor ) futhi kufika ku - 10 pm .
2-Isivakashi kumelwe sihlanze izindawo okwabelwana ngaso ngemva kokusetshenziswa ngokuqondile futhi singashiyi noma yimuphi udoti noma izinto ezingcolile ukuze zihlanzwe kamuva.
3- Isivakashi akumele sishiye iminyango noma amafasitela evuliwe (ukugwema izinambuzane namakati adukayo ukungena endaweni)
4.93 ·46 okushiwo abanye
UMoh'D Ungumbungazi ovelele